IGeorgia iyingozi kubavakashi be-LGBTQ bokuziqhenya: UNWTO SG waseGeorgia akanakho ukuphawula
Ikhaya » Izindaba Zamuva » I-LGBTQ » IGeorgia iyingozi kubavakashi be-LGBTQ bokuziqhenya: UNWTO SG waseGeorgia akanakho ukuphawula
Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba ze-Georgia Breaking • Izindaba zikaHulumeni • Human Rights • I-LGBTQ • Izindaba • Abantu • Ezokuvakasha • Iziphesheli Zokuvakasha | Izeluleko Zokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje • Izindaba Ezihlukahlukene
Ukuziqhenya kwe-LGBT Georgia
Ezokuvakasha zisho ukuthula, ukuqonda komhlaba wonke nokuhlola amanye amasiko. Kusho nokulingana nokubekezelelana. IRiphabhlikhi yaseGeorgia ikhombise ukuqonda okuncane ngemuva kokuthi umthwebuli wezithombe elimele kabi ekubikeni ngokukhanselwa kweGay Pride ngenxa yodlame.
Ukuziqhenya akuyona nje inhlangano yomhlaba wonke yokuthi umphakathi we-LGBTQ uhlangane ubonise ifulegi, iqembu, ukhulume, futhi ujabule, futhi umcimbi omkhulu wezokuvakasha emazweni amaningi emhlabeni.
ERepublic yaseGeorgia, amakhulu ahlangane enhlokodolobha, iTbilisi, ngeSonto ngemuva kokushona kuka-Alexander Lashkarava, enye yezintatheli ezimbalwa ihlasele ngesikhathi amaqembu anodlame egebenga ihhovisi lomkhankaso we-LBGT +, okwenza izishoshovu zamisa uMkhosi Wokuziqhenya kuleli zwe.
Umuntu ophethe iWorld Tourism Organisation, uNobhala-Jikelele we-UNWTO uZurab Pololikashvili akafunanga ukuphawula ngale nkinga eseGeorgia. UZurab uvela eGeorgia.
I-IGLTA iyilungu elihlangene le-UNWTO, i-World Tourism Organisation.
I-UNWTO inoNobhala-Jikelele waseRiphabhliki yaseGeorgia ongathandanga ukuphawula ngesimo esibuhlungu ezweni lakhe ngemuva kokuhlaselwa kwamalungu omphakathi we-LGBTQ, okuphoqa ukuthi kukhanselwe iGay Pride, ukuvakasha nezokuvakasha ezikhangayo emazweni amaningi.
Kuqubuke udweshu ePhalamende laseGeorgia ngoMsombuluko ngesikhathi izintatheli nosopolitiki beqembu eliphikisayo bezama ukungena endlini engezansi bebhikisha ngokufa kukathwebuli oshaywe ngesikhathi kunodlame olubhekiswe kuzishoshovu ze-LGBT ngesonto eledlule.
Amakhulu ahlangane enhlokodolobha iTbilisi ngeSonto ngemuva kokushona kuka-Alexander Lashkarava, ongomunye wezintatheli eziningi ezalimala kabi ngesikhathi amaqembu anobudlova ehlasela ihhovisi lomkhankaso we-LBGT +, okwenza izishoshovu zamisa imashi yazo yokuziqhenya.
NgoLwesibili uMnyango Wezwe waseMelika ucele ukuba kube nokuthula eRiphabhuliki yaseGeorgia ngemuva kokushona kukamthwebuli owashaywa ngesikhathi sodlame olubhekiswe kuzishoshovu ze-LGBT futhi wathi labo abahlasela ababhikishi abanokuthula nezintatheli kumele bashushiswe.
Okhulumela uMnyango Wezwe uNed Price utshele isithangami sabezindaba esijwayelekile ukuthi iWashington ibilandela isimo esiseGeorgia futhi izibophezele ekuboneni ukuthi labo abanesibopho bayabophezeleka.
“Ukuphepha kwazo zonke izintatheli zaseGeorgia, nokwethembeka kwentando yeningi kanye neGeorgia, empeleni, kudinga ukuthi wonke umuntu ohlasele ababhikishi abanokuthula, nezintatheli ngoJulayi 5 no-6, noma labo ababhebhezela udlame, kumele bakhonjwe, kufanele baboshwe futhi bashushiswa ngokugcwele, ”kusho uPrice.
“Sikhumbuza abaholi baseGeorgia nabomthetho ngomsebenzi wabo wokuvikela bonke labo abasebenzisa amalungelo abo ngokomthethosisekelo. Sibakhumbuza ngomsebenzi wabo wokuvikela izintatheli ezisebenzisa inkululeko yabezindaba. ”
Ukuhamba kwezokungcebeleka ukubheja okuphephile kwe-Air France